Scooter elektrika, basy fanorana hozatra, bisikileta fanatanjahan-tena - Jinbang
Ny scooter freestyle (fantatra ihany koa amin'ny hoe scooter, mitaingina scooter, na mitaingina tsotra) dia fanatanjahantena tafahoatra izay mitaky fampiasana scooter stunt mba hanaovana tetika hafahafa izay mitovy amin'ny motocross bisikileta (BMX) sy skateboarding. Hatramin'ny niorenan'ny fanatanjahantena tamin'ny taona 1999 dia nivoatra be ny scooter stunt. Ohatra, ny orinasan'ny scooter Razor dia nifindra tamin'ny famokarana modely Razor A mahazatra ihany koa mba hanao scooter namboarina manokana ary hampiditra ampahany amin'ny orinasa hafa. Rehefa nitombo ny fanatanjahantena dia natsangana ny orinasa sy ny rafitra hanohanana ny fitomboan'ny vondrom-piarahamonina scooter. Ohatra iray amin'ny rafitra fanohanana aloha ny forum Scooter Resource (SR), izay nanampy tamin'ny fampiroboroboana ny vondrom-piarahamonina scooter amin'ny alàlan'ny fampifandraisana ireo olona liana amin'ny scootering tamin'ny taona 2006. Rehefa nanjary nalaza kokoa ny scooter, dia nisy ny fangatahana faritra matanjaka taorian'izay ary ny fivarotana scooter ento ireo faritra ireo.
Ireo scooter mpandeha herinaratra dia mazàna nihoatra ny scooter vita amin'ny entona nanomboka tamin'ny taona 2000. Manana kodiarana kely roa mafy izy ireo matetika, miaraka amina chassis azo ovaina, matetika aluminium. Ny môtô scooter sasany dia misy kodiarana telo na efatra, na vita amin'ny plastika, na lehibe, na tsy mivalona. Ny scooter trickster avo lenta natao ho an'ny olon-dehibe dia manana kodiarana aloha lehibe kokoa. Ny môtô kitra mandeha amin'ny herinaratra dia tsy mitovy amin'ny scooter amin'ny fivezivezena satria mamela ihany koa ny filan'ny olombelona, ​​ary tsy manana fitaovana. Miovaova 5 hatramin'ny 50 km (3 ka hatramin'ny 31 mi) matetika ny elanelam-potoana, ary manodidina ny 30 km / h (19 mph) ny hafainganam-pandeha lehibe indrindra.
Ny zava-drehetra natokanay tao amin'ny JOYBOLD dia momba ny fivezivezena. Izahay dia manavao sy manao mpisava lalana amin'ny maha marika scooter elektrika any Sina izay apetrakay bebe kokoa amin'ny lamaody mamorona, tsy ny filan'ny fiainanao ihany no antenaina fa ny iraka ho an'ny planeta kantontsika any fikatsahana fiarovana ny tontolo iainana.